ရိုဟင်ဂျာအရေး အာဆီယံမှ လေ့လာစောင့်ကြည့် ~ Myanmar Express
From : The Voiceအာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ စူရင်းပစ် ဆူဝမ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ၏ အရေးကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကာ လေ့လာစောင့်ကြည့် နေကြောင်း အာဆီယံ အဖွဲကြီးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ စူရင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး တို့ကို အစည်းဝေးတွင် တိုက်ရိုက် မေးမြန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နှစ်ဦးစလုံးက ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည် ဟုလည်း ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ စူရင်းကို လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည်လေ့လာပေးရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများက တာဝန်ပေးခဲပြီး အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံး အခြေအနေများကို လေ့လာ စုံစမ်းလျက် ရှိသည်။"ကံမကောင်း အကြောင်းမလှရှာတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေအတွက် မျက်စိဖွင့် နားစွင့် ပြီးထားပါမယ်" ဟု အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ စူရင်းက ပြောကြားသည်။အာဆီယံ လူဦးရေ သန်း ၅၉၀ ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မူဆလင်လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ယင်းလူဦးရေ အနက် အာဆီယံ စတင်ဖွဲစည်းရာတွင် ပါဝင်သည့် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှား ပေါင်းလျှင် သန်း ၂၂၀ ခန့်ရှိနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံတွင် ထိုင်းနိုင်ငံပြီးလျှင် ပဉ္စမမြောက် မူဆလင် ဘာသာဝင် လူမျိုးများ နေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂ သန်းခန့် အရေအတွက် ရှိနေသည်။"အာဆီယံက မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်" ဟု ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ဒေသတွင်း အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ရက်ပိုင်း အာဆီယံ ဒေသတွင်း သတင်းစာဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။Myanmar Express
တစ်ကယ်ကိုလူသား အချင်းချင်း သိပ်ကိုစာနာစိတ် ရှိတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲကွက်ပြိး ဖိအားပေးနေမဲ့ အစား တကမ္ဗာလုံးဝိုင်းပြိး. သာတူညိမျှ ခွဲဝေပြိး ရိုဟင်ဂျာအားလုံးကို လက်ခံကြရအောင် ဒါဆို. ဘယ်သူသာတယ် နာတယ် ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
16 July 2012 09:51
ဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ကောင်တွေ ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းပေါက်နေလို့သာ လူလို့ပြောရတယ် လူနဲ့တူတဲ့ အကျင့်စရိုက် ဘာရှိလဲ။မင်းတို့သိပ်ချစ်နေရင် မင်းတို့တိုင်းပြည် ခေါ်ထားလိုက်။ခွေးနဲ့နှိုင်းရင်တောင် ခွေးသိက္ခာကျမယ့် ကောင်တွေ။
16 July 2012 11:15
One Islam, One Musims, One Jihad, One Islamism.Global Islamic Threat Jihad will stop only when there is Nothing left but Islam.FUCK JIHAD, FUCK Global Islamism
16 July 2012 12:10
သတင်း — July 16, 2012 at 10:37 amရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများ အတွက် ဂျီဟက် စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဟု အင်ဒိုနီးရှား အဖွဲ့ (၂)ခုက ဆိုယမန်နေ့ထုတ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ သတင်းစာ The Independent တွင် သဘောထားတင်းမာသော အင်ဒိုနီးရှား မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ (၂) ခုက ရိုဟင်ဂျာများ အတွက် ဂျီဟက် စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဆိုသော သတင်းကို တခြား မြန်မာသတင်းများနှင့် အတူ ပုံနှိပ် ဖေါ်ပြသည်။“ FPI is ready to wage jihad” အက်ဖ်ပီအိုင် အနေဖြင့် ဂျီဟက် ဆင်နွှဲရန် အဆင်သင့် ရှိသည်ဟု ရေးသားထားသော ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ပြီး သဘောထားတင်းမာသော အင်ဒိုနီးရှား မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ (၂) ခုက ဂျာကာတာမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းကို ကိုးကားပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ထုတ် The Independent က ဖေါ်ပြသည်။ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော သဘောထား တင်းမာသော မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ (၂) ခုမှာ Islamic Defenders Front ( IDF) နှင့် Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) တို့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးက မြန်မာသံရုံး တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး “ တောင်းဆိုမူကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါက သံရုံးထဲ အတင်း ချိုးဖေါက် ၀င်ရောက်ကာ သံရုံးကို ဇောက်ထိုး ပြောင်းပြန် ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ကြလော့” ဟုဆိုကာ အသံချဲ့စက်မှ ဆန္ဒပြသူများကို ဆော်သြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။၎င်းပြင်သူက “ မြန်မာပြည်သို့ သွားကြပါ။ သင်တို့၏ ညီအစ်ကိုများ အတွက် ဂျီဟက် ဆင်နွှဲရန် အတွက် မြန်မာပြည်ကို သွားကြပါ” ဟု ဆော်သြသွားခဲ့သည်ဟုလည်း ဖေါ်ပြသည်။“ လွှတ်လပ်မူမှ အပ ကမ္ဘာကြီးတွင် တခြားမရှိ။ မွတ်ဆလင် တစ်ဦးစီ၏ သွေးစက်တိုင်း သွေးစက်တိုင်းကို သွေးမြေကျ ပေးဆပ် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ဆန္ဒပြသူမှာ ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး သံရုံးထဲသို့ အတင်း ၀င်ရောက်ရန် ခြိမ်းခြောက်မူများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အင်ဒိုးနီးရှား ရဲသား ၅၀ ခန့်က ဟန့်တားခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိရာသို့ ဆက်လက် ချီတက်သွားကြသည်ဟု ဆိုသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူကို အသုံးချကာ ပြဿနာကို ပိုမို ကြီးထွားအောင် လုပ်လိုသူများ၏ ချဲ့ထွင် ၀ါဒ ဖြန့်မူများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြမူများ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ တစ်ချို့တွင် ပေါ်ပေါက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စသည် တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာကို ထိပါးလာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်လို့ အာဆီယံမကဘူး ဘယ်သူဘဲစောင့်ကြည့်ကြည့် ဂရုစိုက်စရာမလို။ သမ္မတကြီး ပြောသလိုUNHCR အပ်ပြီး ဒုက္ခသည်လို နေချင်နေ၊ မနေချင်ရင် လာရာလမ်းကိုပြန်။ လက်ခံချင်တဲ့နိုင်ငံရှိရင် စရိတ်အကုန်ခံပြီးပို့လိုက်။
16 July 2012 23:14
16 July 2012 23:17
18 July 2012 21:18
ဘင်္ဂါလီခေါ်ကုလားတွေကို စုံတွဲတစ်တွဲ လောက်ဘဲ ခေါ်ပြီး မွေးလိုက် အဲဒီကနေ မျိုးဆက်တွေ ပွားလာပြီး အဲဒီနိုင်ငံကို ၀ါးမျိုသွားလေ့မယ် အဲဒါ ဒီကုလားတွေရဲ့ သွေးထဲမှာ အပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ မွေးရာပါ အမာရွတ်ဘဲ။--